Automatic Packing Machine - Foshan Blueway လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ, Ltd.
သ, Blueway ပြီးပြီ 10000 ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုနှင့်အတူအင်ဂျင်နီယာဖြေရှင်းချက်. What's more, Blueway သည်တရုတ်စျေးကွက်ရှိ Hilton Hotel မှထောက်ခံသည့်အမှတ်တံဆိပ်လည်းဖြစ်သည်. Blueway သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိမိတ်ဖက်များအားအမြင့်မားဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ဆန်းသစ်သောထုတ်ကုန်များကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းအားဖြင့်၎င်း၏ကြိုးပမ်းမှုများနှင့်ကတိက ၀ တ်များကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်. မေး: Will it be hard for installation and operation?
က: Nope, the packing machine is easy to install and operate.
မေး: What brand of PLC and touch screen?
က: Mitsubish PLC & Eview touch screen.
က: 1 set.
မေး: Material options?
က: ယေဘူယျအားဖြင့်, stainless steel.
မေး: What’s delivery time?
က: အကြောင်း 35 working days once receipt of the advance payment.